काठमाडाै । ब्रिटिश र डच अध्ययनकर्ताले एक मनोचिकित्साको जर्नलमा एउटा लेख प्रकाशित गरेका छन । उक्त अध्ययनका अनुसार मानिसहरू साँच्चै रक्सी खाएपछि सामान्य अवस्थामा भन्दा राम्ररी र धाराप्रवाहका रूपमा विदेशी भाषा बाेल्न सक्दछन । जुन कुरा उनीहरू स्वयंमकाे कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ ।
५० जना विदेशी जर्मनीमा गरीएकाे उक्त अध्ययनमा जर्मनीकाे सिमाना नजिक जाेडीएकाे नीदरल्याण्डमा मास्टस्ट्रिच विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू संलग्न थिए। अध्ययनका सबै मानिसहरूले भनेका थिए कि कम से कम कहिलेकाँही रक्सी पिएकाे बेलामा उनीहरूले सजिलैसंग डच भाषा बाेल्न सक्दथे । जसमा उनीहरूले भर्खरै भर्खरै भाषामा प्रवीणता गरेका थिए ।
उक्त अध्ययनमा हरेक व्यक्तिलाई एक आरामदायक, दुई-मिनेट कुराकानीमा डचमा साक्षात्कार कर्ताको साथमा गरीएकाे थियो। उनीहरूसंग कुराकानी भन्दा अघि, आधा पानीलाई पिउन दिइएको थियो, र अर्को आधामा रक्सी पेय दिइएको थियो। विद्यार्थीहरूमा उनीहरूकाे ताैलका अाधारमा मात्र रक्सी खुवाइएकाे थियाे ।
सबैसंग गरीएकाे कुराकानी रेकर्ड गरियो र त्यसपछि दुई देशी डच स्पिकरहरू द्वारा स्कोर गरियो । जुन कुरा स्काेर गर्ने मान्छेहरूलार्इ थाहा थिएन कि विद्यार्थीहरूले अल्कोहल प्रयाेग गरेका छन । र सहभागीहरूलाई पनि उनीहरूले कसरी बोलेका थिए र कस्तो महसुस गरे, उनीहरूको आफ्नै स्व-स्कोर गर्न लगाइएकाे थियो।
रक्सीले ‘आत्म-मूल्याङ्कनमा कुनै असर गर्दैन , ताकी उनीहरूले साविककाे भन्दा राम्रो प्रदर्शन गरे। देशी डच स्पिकरले सहभागीहरूलार्इ अल्कोहल लिएकाे समूहमा र पानी लिएकाे समुहमा बराबर मूल्याङ्कन गरे । जुनमा पानी पिएकाे भन्दा अल्काेहल पिएकाले राम्राे प्रस्तुति दिएकाे पाइयाे । अल्काेहल पिएका हरूले पानी पिएकाे भन्दा व्याकरण, शब्दावली र तर्कमा राम्राे प्रस्तुति दिएका थिए । अध्ययन पश्चात शाेधककर्ता हरू याे निष्कर्षमा पुगे कि अल्काेहलले मानिसकाे साेच्ने तरीका र अात्मिवश्वासमा फरक पार्दछ । अल्काेहलकाे सामान्य प्रयाेगले मानिसमा सकारात्मक असर पारे पनि उच्च स्तरमा अल्काेहल लिनुले लाभकारी प्रभावहरू नहुन सक्छ। यसले मानिसकाे दिमागलार्इ विपरीत प्रभाव पार्न सक्छ।
“यस विषयमा भविष्यका अनुसन्धानमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुसन्धान कर्ताले दावि गरेका छन । जब अध्ययनले मानिसहरूको मानसिक अवस्था वा भावनाहरूको मापदण्ड गरेकाे थिएन । तर उक्त अध्ययन अनुसार भाषाकाे विषयमा प्रविणता प्राप्त गर्न भने अभ्यास गर्न सकिनेछ । “यसले सामान्य भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई सानो मात्रामाअल्काेहल पिउने हाे भने त्यसबेला विदेशी भाषामा अझ बढी प्रवाह बोल्न सक्षम हुन सक्छ” भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ।
प्रकाशित : बिहिबार, माघ १८, २०७४१३:३४
कञ्चनपुर घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न नेकपाको सरकारसँग माग !
डोनाल्ड ट्रम्प भेट्न उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन भियतनाम प्रस्थान !
देशकै तेस्रो केबुलकारको परीक्षण सफल, अब केबुलकारमै सरर कालीञ्चोक !